Hebreo 6 Hebreo 7 Hebreo 8
Fa io Melkizedeka io, izay mpanjakan'i Salema sy mpisoron'Andriamanitra Avy Indrindra, ilay nitsena an'i Abrahama, rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitso-drano azy,
sady nomen'i Abrahama ny ampahafolon'ny zavatra rehetra aza(voalohany, raha adika ny anarany, dia Mpanjakan'ny fahamarinana, dia vao Mpanjakan'i Salema koa, izany hoe: Mpanjakan'ny fiadanana;
tsy manan-dray, tsy manan-dreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny Zanak'Andriamanitra), - izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva.
Ary hevero ny halehiben'io lehilahy io, izay nomen'i Abrahama patriarka ny ampahafolon'izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina.
nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolon-karena tamin'i Abrahama sy nitso-drano ilay nanana ny teny fikazana.
Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa ny kosa dia izay nambara fa velona.
Koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoronan'i Levy (fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna), ahoana no mbola ilana mpisorona hafa hiseho araka ny fanaon'i Melkizedeka ihany, izay tsy hotononina ho arakany fanaon'i Arona?
Fa Izy dia nambara hoe: Hianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka (Sal. 110. 4).
Ary tahaka an'i Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamn'ny fianianana
- fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa Ity tamin'ny fianianana nataon'Ilay nilaza taminy hoe: Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina: Hianao no Mpisorona mandrakizay (Sal. 110. 4) -
dia tahaka izany koa no nanaovana an'i Jesosy ho Mpiantoka ny fanekena tsara lavitra.
Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy;
fa Izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana, satria maharitra mandrakizay Izy;
koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy.
Izay tsy mila hanatitra fanatitra isan-andro tahaka ny ataon'ireny mpisoronabe irany, voalohany noho ny otan'ny tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa; fa izany dia nataony indray mandeha ihany, raha nanatitra ny tenany Izy.
Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisoronabe; fa ny tenin'ny fiainana kosa, izay tato aorian'ny lalàna, dia manendry ny Zanaka, Izay notanterahina ho mandrakizay.